Dobby Gibson: Putting Poetry in Motion - McKnight Foundation
Qeybta:Aaladda3 min akhris
Dobby Gibson: Ku gabagabaynta gabayada
By Shanai Matteson, Colin Kloecker
Gabayga Motion ka Hawlaha Hawlaha on Vimeo.
Sidee gabayadu ula shaqeyn karaan farshaxanno iyo bulshooyin kale si ay gabaad uga dhigaan adduunyo siyaabo cusub?
Dobby Gibson waa gabayaa, laakiin kuma koobi karo shaashadda. Wadahadalladii ugu horreeyay ee aan isaga la yeelanay ee ku saabsan Gobolka Mashruuca Farshaxanka Farshaxanka, Dobby wuxuu qirtay in waagii hore uu ka caga jiiday inuu u sheego saaxiibbadiisa iyo kuwa ay yaqaaniin noloshiisa suugaanta. Wuxuu qirayaa in fikradaha caanka ah ee gabayada ay inta badan ku dhigaan qaabka farshaxanka labada xagjirka ah, mid raac ah ama mid jeesjees ah. "U sheegista qof in aad tahay gabayaa waxaay noqon kartaa taageer deg deg ah oo muuqaal ah ama dilaa aamin ah, waxay kuxirantahay qofka aad lahadleyso."
Waxay kuu noqon doontaa, Buugga saddexaad ee gabayada Dobby, ayaa la daabici doonaa sanadka dambe Press Graywolf. Markii aan u fadhiistay si aan ula hadlo Dobby oo ku saabsan gabayada iyo filitaanka sugitaanka buug cusub oo la joojiyo, waxaan ogaanay sida qaar badan oo ka mid ah fannaaniinta kale ee aan ognahay, maalmo maalmahan wuxuu ku fekeraa wax badan oo ku saabsan suurtogalnimada suuban ee qaabka farshaxan ee uu doortay.
Mid ka mid ah su'aasha ka soo baxday wada hadalkayaga ayaa ku saabsanaa siyaabaha kala duwan ee gabayaaga iyo daabacayaashu ay ka fogaanayaan dhexdhexaadkooda iyo dhiirigelin, xiriirin cusub oo ay la yeeshaan farshaxanno kale, iyo isku xirnaanta bulsho hal abuur leh.
Maaddaama ay farshaxanno badanaa ku dhiirigeliyay isgoysyadaas, waxaan ku faraxsanahay inaan helno hab lagu wadaagno gabayada Dobby oo ay la socdaan dhagaystayaal cusub iyada oo loo marayo mashruucan fiidiyowga. Markii aan soo jeedinay Dobby in aan u soo bandhigno gabay dhaqameed oo ku yaala meel gaar ah, wuxuu soo jeediyay inaanu hogaamino baska 21 on East Lake Street. Kadib, mid ka mid ah gabay cusub wuxuu dhiirigeliyay oo loo qoray safarro badan oo baska ah inta uu ku sii socdo iyo ka tago shaqadiisa.
Waxaan go'aansanay inaan ka daawanno Dobby akhrinta "Cunto-qabsasho" iyadoo la raacayo wadadan caanka ah. Dhamaanteen waanu walwalsanahay sababta oo ah dhagaystayaasha akhrinta waxay noqon lahaayeen kuwo aan la fileynin, oo aan malaynayno, laga yaabo inaanay ku faraxsanayn joojinta. Ma aanan rabin in aan baabiinno qof kasta oo raacaya, sidaas awgeed waxaan isku dayeynay inaanu ilaalino qadar yar. Inta badan naga yaabiyay, akhrintu waxay u muuqatay mid dabiiciga ah ee safarka, waxayna keentay wada sheekeysiyo aan la filayn oo xidhiidh ah.
Mid ka mid ah nala soo fadhiya nalaga soo horjeeda ayaa u sheegay Dobby in uu yahay taageere wayn oo gabay ah, isaga oo uga mahadceliyay kulan aan la fileynin, iyo in uu waydiiyo inuu waligiis daabacay buugag. Qaar kale waxay u muuqdeen kuwo xiiso leh, oo loola cararay ama loola cararay sida Dobby akhriyey qaybo gabay ah oo faahfaahinayay waayo-aragnimadiisa jidkaas. Qalab kale oo kale ayaa ku soo qoray bogga dhageysiga gabay akhriska ku jirta baskeeda, oo ah dhacdo aan caadi aheyn sababtoo ah waxay ku socotay shirkii gabayada ee galabnimadii halkaas oo Dobby uu hadli lahaa. Waxay ahayd jimicsi sahlan oo aan leexineynin oo gabayo gabagabeyn ah, laakiin waxay ku soo bandhigtay gabayada siyaabo cusub oo loogu talagalay dhagaystayaashii yaryar ee ka dhacay East Lake subaxdii.
Ka dib, waxaan waydiisannay Dobby waxa uu u maleynayey inuu ahaa mid ku habboon gabayada dhaqankeena casriga ah, wuxuuna u muuqday inuu dareen isku dhafan. "Waxaa laga yaabaa in gabayadu aanay khusayn. Dadku waxay ku noolaan karaan nolol fiican oo wanaagsan oo waligeed marwalba gabay gabayada aroosyada iyo aaska. Laakiin waxaa jira wax murugo leh oo ku saabsan. Waxay u egtahay inaad noloshaadii oo dhan wada qaadato adoo cunaya Cuntada TV-ga, marnaba looma arko fursadaha luqadda oo dhan. "
Shanai Matteson iyo Colin Kloecker waa Agaasimayaasha Wadajirka ah Hawlaha Hawlaha, oo ah nashqade naqshad dadweyne ee loo yaqaan 'artist-led'. Hawlaha Horumarinta waxay abuurtaa farshaxan iyo iskaashi mashruuc oo dhiirrigeliya, wargelinaya lana xidhiidho; xariirka cilaaqaadka xuduudaha hal-abuurka iyo dhaqanka; iyo bixinta riwaayado cusub oo loogu talagalay ka qeybgalka dadweynaha. Waxaad ka heli kartaa on Twitter at @works_progress.
Eeg Xaaladda kale ee Fanka Fiidiyowga
Mawduuca: Fanka & Dhaqanka